Ahoana no ho fiantraikan’ilay ‘coronavirus’ tao Wuhan amin’ny politikan’ny Shina amin’ny hoavy? · Global Voices teny Malagasy
Ahoana no ho fiantraikan'ilay ‘coronavirus’ tao Wuhan amin'ny politikan'ny Shina amin'ny hoavy?
Voadika ny 13 Febroary 2020 5:46 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, polski, Español, русский, українська, Ελληνικά, 繁體中文, عربي, Deutsch, Yorùbá, ਪੰਜਾਬੀ, Қазақша, English
Afisy maneho sarintanin'i Shina eo ambonin'ireto endri-tsoratra efatra manaraka ireto 武汉肺炎 midika hoe aretintratran'i Wuhan. Sary nahazoana alàlana.
Zavatra iray nanomboka tao aminà tsena fivarotana hazandranomasina, toy ny hoe olana ara-pahasalamàna teo an-toerana monja ihany, no nihitatra ho lasa olana iray ara-pahasalamàna ho an'ny firenena tao Shina. Rehefa fantatra ny amin'ilay coronavirus tao Wuhan, tamin'ny Desambra 2019, nisy fanehoankevitra nanao tohivakana nanohina mafy ny fiarahamonina shinoa ary nanohintohina ny filaminana politikan'i Beijing (Pekin).
Voageja loatran'ny fikirizany hifehy ny vaovao, nanemotra ho herinandro maromaro ny famoahana ireo vaovao / torohay tokony ho nahavotra aina ny governemanta shinoa, na ny foibe izany, na ny tao an-toerana. Efa tara loatra anefa izany ho an'ireo olona efa tratr'ilay aretina, rehefa injay ry zareo, tany amin'ny faran'ny volana Janoary, nanapaka hevitra ny hametraka fepetra henjana ho fisorohana ny fiparitahan'ilay valanaretina, satria efa nanomboka sahady ny fanombohana ny fankalazàna ny Taombaovao Shinoa.
Ireo mpitsabo sy mpahay siansa dia mbola miady hevitra sy mikaroka momba izay loharano niavian'ilay coronavirus ao Wuhan, viriosy mamely ny havokavoka ary mety ho tonga hatrany amin'ny pnemônia. Teôria iray azo raisina ny hoe mety ho avy amin'ny bibilava na fanihy izay zava-pihinana tena ankafizina fatratra ao Shina ary amidy ao amin'ny tsena mandon'i Huanan ao Wuhan, toerana heverina ho niaingan'ilay viriosy.
Fanontaniana iray goavambe mamaritra ny fiparitahan'ilay valanaretina ny fahafahany mifindra: afaka miampita avy amin'ny vatan'ny olona iray mankamin'ny iray hafa ve ilay izy ary firy eo ho eo no salanisa mety ho tratra avy amin'ny olona iray mitondra ny viriosy? Ny tarehimarika medikaly farany dia maneho fa misy ny fifindrany avy amin'ny olona mankamin'ny olona, ary ny tena mampanahy dia toa mitranga izany alohan'ny hisehoan'ny soritr'aretina amin'ilay voalohany nitondra azy, ka vao mainka manasarotra ny fitiliana.
Raha ny momba ny taham-pifindràny, antsoina hoe “tondrom-pihomboana fototra” hoy ireo mpahay momba ny valanaretina, dia inoana ho eo anelanelan'ny 2 sy 3 tamin'ny faran'ny Janoary, izay midika fa olona iray mety hamindra amina olona roa na telo, saingy mbola iadiana hevitra ny amin'ireo isa no sady ilàna fikarohana lalindalina kokoa raha toa ka misy angondrakitra azo itokiana voarain'ireo mpanao fikarohana.
Raha toa ka mitombo isanandro ny isan'ireo olona tratra, misy olana ara-pahasalamana iray goavana mitombo any Hubei, faritàny afovoany ao Shina, sy Wuhan renivohiny, izay rehefa atambatra dia misy vahoaka manakaiky ny 60 tapitrisa. Satria efa voamarina ny fisian'ilay valanaretina manerana an'i Shina manontolo, miatrana daholo izao ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra, manampy ny tsindry efa mahazo ny rafitra medikaly izay mazàna no tsy maharaka ho an'ny vahoaka betsaka sy efa antitra tahaka ny ao aminy.
Fa tsy olana ho an'ny fahasalamàna monja ihany ny ‘coronavirus’ ao Wuhan, fa koa ora fitsapana goavana ara-politika ho an'ny governemanta. Tena hita nanimba ny fitokisan'ny vahoaka ny governemanta ny nilazany hoe tsy misy zavatra atahorana momba izany, mandra-pilazany ny marina, efa elabe taty aoriana, ary tsy tao amin'ny faritanin'i Hubei irery. Voakiana i Beijing noho ny fomba nandraisany an-tànana ny valanaretina SARS tamin'ny 2002-2003 noho izy nanafina ny vaovao tsy ho fantatry ny OMS (Fikambanana Iraisampirenena ho any Fahasalamana). Tsy niloa-bava momba ilay valanaretina i Xi Jinping, mpitarika ambony ao Shina, hatramin'ny 20 Janoary nanaovany fanambaràna ho an'ny daholobe nanekeny ny maha-henjana be ny toedraharaha – efa volana iray taorian'ny nahitàna ireo tranga voalohany tamin'ilay valanaretina. Mbola mitoetra ho henjana be ny fifehezana ny vaovao, ary noho i Shina miaina ady ara-barotra amin'i Etazonia sy ny fihisàran'ny toekarena, ny fandraisana an-tànana ny fiatrehana ilay valanaretina coronavirus ao Wuhan no hamaritra ny ho fiainan'ny fiarahamonina shinoa sy ny politikany ho an'ny taona 2020.
Ho havaozina hatrany ny pejy, fa azonareo atao kosa ny mamaky misimisy kokoa ato anatin'ireto tantara manaraka ireto (amin'ny teny anglisy raha mbola tsy voadika ho teny malagasy: